muva esiko uchungechunge TES agcwaliswa nge entsha ingxenye - Skyrim. Njengoba kulindelekile, kule mdlalo thina zanakekelwa elikhulu RPG-yonke yezwe evulekile futhi kucishe kube isibalo esingapheliyo amathuba. Kuphela ukuthola zonke izindawo kumephu, zama zonke izinhlobo izikhali zempi, ukudabula zonke izimfuno, kuthatha iminyaka. Ngakho-ke, abadlali abaningi baye bathola indlela engcono ngokushesha ukuhlola emakhoneni esingaziwa yonke abathandekayo - amakhodi "Skyrim": zonke izinto, izimfuno, izindawo kanye kuvulwa ukwanda amandla hero. Yebo, kungenzeka singahlangabezani ukuvunyelwa abalandeli yochungechunge kweqiniso, banquma, kodwa uzokusindisa amahora amaningi ngesikhathi khulula. Ngaphambi kokusebenzisa i-ukukopela amakhodi ukukhumbula izimiso ezimbalwa ezilula.
Ukungathembeki ziwumthwalo eziningi imikhawulo umdlalo ilayisensi, isibonelo, itholakala ku-Steam noma uhlelo impumelelo yokuthola. Ngakho qiniseka ukuthi enze elilodwa londoloza, obekungadala "Skyrim" ukuze ukusetshenziswa ukukopela amakhodi. Lokhu kukuvumela ukuba ngokushesha "Phindela emuva" umdlalo uma amaphutha.
funda ngokucophelela aphambe ofuna ukuyisebenzisa. Uma othile it is hhayi ukuthi kuzokwenzekani uma lokhu noma lokhuya faka ikhodi ekugcineni Kungenzeka ukuthi wena ukulayisha CPU futhi ubonisa umdlalo isinyathelo.
"Skyrim" efunwa kakhulu izimfanelo computer, ngakho uma une ababuthakathaka processor Gwema usebenzisa amakhodi ukuthi abasindwayo kakhulu eziningi izinto (isibonelo, indawo yokuhlola).
Ukunika amandla console futhi ukulungisa iphutha
Console - kuyinto ifasitela lapho ukungena amakhodi. Njengomthetho, uyivule ngokucindezela "tilde" - "~" nge umfanekiso izinhlamvu ukhiye.
abadlali abaningi babhekana yokuthi console ayivulwanga, noma esikhundleni izincwadi ezishicilelwe ezigcawini zalo evulekile. Iqiniso lokuthi inketho ke kungacinywa noma amisiwe a Russian esikhundleni isiNgisi, ngoba ifonti ayibonwa futhi uhlelo, futhi esikhundleni ingena esikhundleni izinhlamvu engaziwa izikwele.
Elungisa inkinga nge ifayela ngokusebenzisa izilungiselelo game. Lena idokhumenti umbhalo okuthiwa fontconfig, esemgwaqweni kufolda kuleli kheli elilandelayo: Skyrim => Idatha => Interface. Ngaphakathi kuwo kukhona ibalazwe umugqa $ ConsoleFont, okuyinto kufanele zishintshwe ukuze FuturaTCYLigCon Arial. Ungakhohlwa ukulondoloza ifayela!
Guqula ulimi - ke imizuzu emihlanu. I "Imibhalo Zami" ifolda => Imidlalo yami => Skyrim wafihla ifayela Skyrim.ini. Funa it in an sLanguage ice = isiRashiya bese wengeza ngemva kokuba sConsole = ISIZULU. Londoloza futhi ubone umphumela. Uma console abese ehlala isiRashiya, kuyodingeka ungene izilungiselelo zohlelo lokusebenza. Amajaji yokulawula kuthebhu "Izinketho Yesifunda Ulimi" - "Ulimi" udinga ucindezele "Okuningi", okuzokwenza kube ukuze IsiZulu iba ulimi olumisiwe.
Zonke umsebenzi kwenziwa, manje ungasebenzisa amakhodi umdlalo "Skyrim 5".
Inkinga yokuqala, i-pop-up in the ekuqaleni game - uhlamvu ababuthakathaka. Hard ukudlala hilyakom ngubani kuphela bangalwa nge amagundane kodwa abalimi kungahlonyiwe, futhi kwenza izinyawo lapho bebona nebhere. Kukhona amakhodi "Skyrim" (ukushintsha amakhono umlingisi), futhi nje imizuzu embalwa ungenza encane soldatishki ligorha nge Imizimba enkulu.
Ukuze uthole lezi amakhodi, kubalulekile emva "umzimba" yezinombolo Ikhodi efakiwe ku iphesenti ufuna khulisa likhono lelitsite. Ngokwesibonelo, ukuthuthukisa ukuqephuza kuka-75% kuyadingeka ukuze ufake SpeechcraftPowerMod 75.
Kubalandeli of "Stealth" futhi ngesivinini amakhodi ukuthuthukisa umuzwa wakho esikhathini ukutholakala nezikhali eyodwa ngilambatha (OneHandedPowerMod), u-anyanisi (MarksmanPowerMod) nokukhanya zempi (LightArmorPowerMod).
Warriors abakhetha amandla ukuhamba, abanesifiso ikhodi yokuthuthukisa dvuruchnikom ubungoti (TwoHandedPowerMod) noma isihlangu (BlockPowerMod), kanye zempi esindayo (HeavyArmorPowerMod).
Amasela kudingeka ahlolisise iphrojekthi "Skyrim" ku ikhodi master key (player.additem 0000000A X), lokho esikhundleni nje X isidingo ucacise indlela ofuna ukuthola master okhiye, kanye ukuze kwenziwe ngcono izinga kobunikazi (LockpickingPowerMod). Kodwa lapho kungasondeli sela ngaphandle ukuthuthukiswa kwamakhono we pickpocketing (PickPocketPowerMod) futhi ngobuqili ezinhle (SneakPowerMod)?
Uma izinto enizithandayo - Blacksmithing, alchemy kanye imilingo, kuyasiza ikhodi ukwandisa ngowokuqala (SmithingPowerMod), wesibili (AlchemyPowerMod) noma wesithathu (EnchantingPowerMod) ngokulandelana.
Isiphukuphuku ngeke uhambe Izanusi nabathakathi mdlalo "Skyrim" ku ikhodi master key ayidingi master of illusion (IllusionPowerMod), isikhali ngeke kuphela ukugxambukela nabathakathi Destroyer (DestructionPowerMod), futhi ngaphandle zempi uzoba izikole abameleli ukuzivikela yokutakula ezinhle (RestorationPowerMod), futhi kodwa sibonakalise yakhe necromantic amakhono abathandi obuthakathi (ConjurationPowerMod).
Kodwa kukhona evamile zonke izinhlobo ongakhetha izinhlamvu, okuyinto ukwandisa angajabula futhi bili, futhi iqhawe futhi isela: amandla, ezempilo mana. Ukuze wenze iqhawe lakho Husky, faka umyalo ku-console player.setav Impilo X, lapho X - kuyinto sibalo ukuthi kubonisa impilo esiphezulu uhlamvu. Okungukuthi Uma X = 500, impilo uhlamvu 500. Ngokufanayo kukhona amakhodi phezu Mana (player.setav Magicka X) okukhuthazela (player.setav Amandla X).
Umyalo elula ukwenza ngcono - advlevel.
Guqula nobuhlanga, ukubukeka and ukunambitheka izintandokazi
Ngesikhathi lo mdlalo, ungase uthole nesithukuthezi uhlamvu noma ukubukeka yebala lakhe. Uma ukushintshashintsha kuqala-game usizo, "lo umqophi sabantu" we nemifantu ukuthi uhlanga kuyodingeka ukuba esikhundleni ngemva umhleli uhlamvu ukuthi angavulwa ngokuthayipha umyalo ezifana Showracemenu. Kodwa umdlalo "Skyrim" khodi uhlanga - akulona kuphela indlela olukhulu kushintsha isimo. Ngakho, ngemva kokufaka SexChange yena zizoshintsha phansi, nje mayelana ebusweni kuyoba ngokufanayo njengoba kwakunjalo. Ungakwazi futhi ukushintsha ukuphakama ikhodi yohlamvu player.setscale X, lapho X kuyadingeka ukubeka inombolo, uma sicabangela ukuthi u 1 - kuba 100%, kanye 2 - 200% ukukhula ejwayelekile.
Kodwa uma futhi lokhu akwanele, uma uhlamvu, owaphumelela umjaho, ukubukeka nobulili, Ngokubona kwakho, ayizange wayehlupheka ke ngegciwane Lycanthropy yakhe (player.addspell 00092C48), ukungeza amandla okuguqula ibe werewolf, bese enye futhi Sanguinar Vampiris ukuthi ngezinsuku ezintathu nge-10% amathuba egijima ezungeze idolobha futhi ngifuna umuntu ukumunca lonke igazi iconsi lokugcina (player.addspell 000B8780). Ayithandi mdlalo "Skyrim" amakhodi vampire. Akukona nje kuphela ukuthi isifo isifo, kukwenza isidalwa bloodsucking, kuphela emva kwezinsuku ezintathu bayashintshana ekufukameleni, ngakho uma wenza uhlelo enkulu mzimba, kungase kungenzeki. Khona-ke kufanele ukushayela player.removespell 000B8780, ukukholisa mdlalo lutho hhayi ukugula, uphinde ungene ukuthi player.addspell 000B8780, ulinde izinsuku ezintathu. Futhi ngakho nje ungazitholi phakathi imiphumela asebenzayo esigabeni nge magic of "sengozini nomlilo." Enye into ukuthi uma sithatha ukutheleleka, ikhambi akulula njalo kuye. Ukuze wenze lokhu, zikhona e-game imfuno, futhi ikhodi iqedwa futhi, eqinisweni, ephulukisa uhlamvu - setstage 000EAFD5 10. Futhi nangu deda - uma benaso lesi sifo okwesibili sizophola akuseyona kungenzeka, ngoba imfuno usuphothuliwe. Ngakho qaphela bese uzinqumela uma uludinga - ukuba vampire.
Ukuxhumana ne Animate nemvelo ezingaphili
Ukusebenzisa kuphrojekthi "Skyrim" amakhodi izinhlamvu noma izilwane, udinga ukuya "isisulu" futhi console evulekile xhoxha inkinobho wakhe yesinxele. Ngemva kwalokho, inkulumo ethi "ID_obekta" izovela iwindi, kusho ukuthi wenze konke okulungile.
Amakhodi for umdlalo "Skyrim 5" ethandwa kakhulu futhi ewusizo abadlali. Ngakho, indlela elula futhi ephumelela kunazo ukuqeda isitha engahlula - ukubulala ikhodi ukusuka ezixukwini sezitha - killall, kodwa uqaphele, lokhu bazonibulala iqembu nabangane bakho. Ezimweni ezinjalo, uma ngephutha yabulala ungumuntu othile nje obalulekile, khona ukuvusa 1 - ekuvukeni kwabafileyo. Phela, labo amakhodi ziyasebenza izilwane. Uma kwaqeda ubuhlobo nabanye uhlamvu kubalulekile kuwe, isibonelo, waxabana nomkakhe, isixazululo enkulu - ukusula nethimba lakhe inkumbulo resetai.
Nge ikhodi kanye nokuqukethwe iqoqo izinhlamvu ngeke zisaba imfihlakalo kuwe. Omunye uye kuphela ukungena Inv - futhi uyofunda ukuthi kukhona ekhukhwini le "NPC", futhi uma amaphuzu e-openactorcontainer console ice 1, uzokwazi hhayi kuphela ukubheka izinto zabanye abantu, kodwa futhi ukushintshashintsha imishini. Uma ufuna ukumosha ukuhweba kwabanye uhlamvu, removeallitems umyalo isetshenziswa ukusula uhlu lwemishini lezinto angaphandle. Kodwa le nkulumo langena duplicateallitems umdlali amakhophi zonke izinto ye-NPC bese wengeza ukuba yokusungula yakho kakade. Uma ngempela angisithandi iyiphi i-NPC, ungakwazi faka ikhodi removeallitems umdlali futhi ngokoqobo ukuhlubula uhlamvu, ngokuthumela zonke izinto ezitholakalayo yokusungula.
Uma udinga ukuze uthole ngokushesha endaweni ethile, Spectral Horse umhlangano ngemuva kokulinda i-wokufaka kusukela player.placeatme console 0010BF90.
Teleportation futhi levitation ngaphandle travel okusheshayo
Esikhathini esiningi umdlalo ithatha izindawo yokusesha. Kuze uphelelwa ukuba abone umuzi kwezinye emhumeni phezu kwememori khadi, kungase kuthathe amahora ambalwa.
Indlela elula ukuthuthela uhlamvu olufunayo wena - faka X umyalo player.moveto, lapho X - ID ye-NPC. Uma udinga noma yikuphi endaweni ethile, kufanele ufake player.setpos [-eksisi] [Inombolo] kubakaki lubhalwe akufanele. Kuleso simo, uma ungazi kordinaty yayo ngokuthé ngqo, ichaze kubo ukuba yinkinga. Ukuze wenze lokhu, uzodinga ukusebenzisa ezintathu izikhathi player.setpos ithimba [-eksisi], ngesikhathi esikhundleni sokusebenzisa [-eksisi] izinhlamvu x, y, z, nokubhala noma ngekhanda, ukuboniswa esikhundleni izinombolo. Ukuyisa uzodinga ukusebenzisa inhlanganisela kathathu player.setpos [-eksisi] [Inombolo], kodwa lokuqala kuyoba indawo [-eksisi] x incwadi, futhi baloba inombolo ahlukaniswe ngesikhala, bese ikhodi efanayo, kodwa y incwadi, futhi isivele inkomba futhi ekugcineni z. Ukuhambisa kwenzeke ngokushesha ngemva kokufaka amakhodi emithathu ukuvala console.
Kodwa qaphela ngale khodi ukukopela! Ukubhala indawo non-akukho, ugijima ingozi sindisa CPU futhi fly aphume game.
TFC ikhodi kuhlanganisa indiza khulula ngawe, futhi uma ukudlala iphesenti oseqenjini setgs fJumpHeightMin 100, ungalungisa ukuphakama kuzuba (100 ukushintsha a sibalo ngaphezulu).
amakhodi kakhulu ku "Skyrim" (bonke)
Yiqiniso, e "Skyrim" has a uhlu amakhodi ukuthi bahlukile ngokwabo futhi akudingeki okufanayo kwezinye izigaba. Ngokwesibonelo, indinganiso lonke uchungechunge TES ikhodi tgm unika umlingisi ukungafi nokungonakali tmm 1 kuvula kanye lonke nebalazwe.
Kusese emikhulu amakhodi "Skyrim": wonke iziphonso, iziphiwo, ukuklabalasa Dragons (PSB); Invisible - player.setav lokungabonakali 1 (ngemuva ukwethulwa ikhodi efanayo, kodwa ngeqanda esikhundleni edinichki); ukuba udabule izindonga (TCL), kanye nokweba ungajeziswa (tdetect).
Kwakungeke kuvesane wehluleka wena umxhwele, kodwa kakhulu "okumnandi" - ikhodi COC qasmoke. Ngeke teleport ube uhlobo ukuhlolwa Igumbi ukuthuthukiswa lapho baqhubeka zonke izinto umdlalo. Thina wathokoza eziningi kangaka futhi wathola umnyango ukuphuma le ndawo engekho, ungafaka Riverwood COC futhi teleport e Riverwood.
Ziyingozi tm ithimba kuzosusa yonke esibonakalayo, it has a ikhampasi, emehlweni kanye nezinye imifanekiso ezokwenza skrini enhle lingagcwali izinto eziningi.
Sheshisa umdlalo kungaba, ushintsha inombolo ibinzana setha esikaliwe ukuze 0. Kuyadingeka ukubeka endaweni zero izinkulungwane eziyishumi, futhi ngosuku umdlalo kuzothatha imizuzwana embalwa. Lena awusizo kakhulu, isibonelo, uma elinde ukubonakala izimpawu vampirism emva kokutheleleka.
Uma ngephutha hit umngane wakhe, futhi ngeke ukuthethelela ukungathembeki okunjalo, faka stopcombat - futhi ngeke nibe abangane.
Uma uthanda izinto emashalofini ezitolo angaphandle, hambisa isikhombisi nge-subject ethize, vula console nokubhala setownership, khona-ke uyoba waqonda njengoba umdlalo ungumnikazi.
Dragons kanye ukukhala
Ukumemeza - kungcono omunye wemizila ebaluleke kakhulu ukulwa amakhono uhlamvu. Amakhodi ukuxazulula izinkinga eziningana ezihlobene nazo. Ngokwesibonelo, ngemva kokusebenzisa ngokukhamuluka udinga ulinde imizuzwana embalwa kuze kube yilapho "agcwalisiwe". Ukuze ulungise le nkinga, kufanele ufake player.setav shoutrecoverymult 0. Kodwa player.modav dragonsouls X izokwengeza ukuba isibalo dragon imiphefumulo, uyoba ufaka izinombolo esikhundleni X. incwadi Ikhodi efanayo - player.setav dragonsouls X, kodwa ingasetshenziswa ngokushesha ukubeka ukubaluleka imiphefumulo dragon ukuba yokusungula yakho. Ngokwesibonelo, faka 300, uzobe imiphefumulo 300, bese wahamba wabhala ikhodi efanayo, kodwa isibalo 254, nemiphefumulo 46 zinyamalale benganakwa muntu. Ngokuvamile, lezi amakhodi amabili ukusebenza okufanayo, kuphela yesibili ivumela kakhudlwana futhi inciphise atholakale dragon wena imiphefumulo.
Kodwa amakhodi ezibaluleke kakhulu kwi "Skyrim 5" - dragon, kunokuba nokumemeza. Ngemuva kokufaka setrace dragon ithimba uzoba umshini flying ngokubulawa, futhi lokho kukodwa uhlukile, njengoba hhayi zibonakale ngaphambili yimuphi omunye imidlalo, i-TES, noma ikuphi.
Kanjani ukuyeka ukusebenza, kodwa bazakhele
Ekuqaleni, igolide limbiwa umdlalo onzima. Kulula ukungena ikhodi imali "Skyrim" futhi umbuzo ukuthi afeze imfuno ezingabazisayo ezimbalwa kweshumi igolide uzonyamalala bebodwa. Kubonakala sengathi lokhu: player.additem 0000000F X, lapho X, njengoba thina sesinomkhuba, - inombolo. Ungathola noma yimuphi isamba semali, enye into ezinye izinto kangangokuthi abanasikhathi esiteji eliphezulu umdlalo cishe ndawo.
Uma ungafuni ukusebenzisa khodi imali "Skyrim" kunezinye izindlela imali ethe xaxa. Elinye lamacala enenzuzo kakhulu - ukweba. Ekuqaleni, ngaphandle kwalabo kakade ngenhla imiyalo, ungasiza kule izikebhe ikhodi yokuvula, uvula yimuphi yokuvala. Kukhona indlela umuke izinto ngaphezulu umdlalo "Skyrim" - khodi isisindo player.modav carryweight X (X = sibalo ku emikhulu kangakanani). Inkinga eyinhloko imisebenzi engekho emthethweni kuyoba ukuthi kungenzeka ukuthi ubanjwe eMthethweni futhi ucele umvuzo ikhanda lakho. Yiqiniso, ungakwazi yini ukubhala imigomo benecala futhi ubeke igolide intshontshiwe ukuthotshelwa komthetho esenana nonembeza omuhle, kodwa ungafaka umyalo player.setcrimegold 0 - futhi ibhonasi ukufa yakho kuzoncishiswa zero.
Nokho, emva kokuthola noma iluphi iholo ngaphandle ukukopela amakhodi - lena ngempela "fan" omkhulu futhi ziyinto inketho esijabulisayo, okungenani ngo okufanayo Amasela Guild. Futhi imali ngokusebenzisa amakhodi - lokhu ngaphandle ungqimba wonke Gameplay: sekulingisa nomholo yangempela. Kufanele kuqondwe ukuthi imodeli kwezomnotho we Onjiniyela ezingamaKristu kwakudingeka zisebenzele ezinyangeni ezimbalwa.
Izikhali zempi e umdlalo
In the game "Skyrim" aphambe, amakhodi izikhali Cishe eminingi kakhulu. Izikhundla nge amazinga ehlukene kobunikazi isibhamu, ukuhlinzeka labo noma namanye amakhono - kuyinto sonke isendlalelo zamaqembu ehlukene.
Ungakwazi ukwandisa umonakalo izikhali, usebenzisa player.setav attackdamagemult X ikhodi, lapho, njengenjwayelo, esikhundleni X Udinga ukucacisa inombolo. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi kalula ukwandisa isivinini zokuhlasela lokhu noma lokhuya isikhali Kwesokunxele (player.setav leftweaponspeedmult X) noma esandleni sokunene (player.setav weaponspeedmult X), okwenza emagatsheni umlingisi grinder bukhoma. Uma ufaka la aphambe udinga khumbula ukuthi amazinga aphezulu kakhulu ngokuphelele ukubulala okwangempela ezokwenza sinomthelela inzalo.
Abasekeli imilingo ikhodi efanelekayo ukwandisa ukukhokhiswa izingalo e kwesokunxele (player.setav LeftitemCharge X) kanye nasengalweni (player.setav RightitemCharge X).
Kodwa abalandeli ukusebenza izikhali nenhlanhla okungaka - ahluke kulawo amaqembu okukhulunywa ukwandisa ubungoti, thola okuthile nzima. Futhi ngakho, kule mdlalo "Skyrim" ukukopela amakhodi mayelana nezembatho zempi ungathandi.
Ukuze uthole isikhali noma zempi bese wengeza yokusungula yakhe, odinga ukukwazi ID into. Kuyinto izinombolo ezimbalwa ukuthi singabakaNkulunkulu kuphela kuye. Ngokwesibonelo, ukulayisha umdlalo "Skyrim" khodi ebony nangesigqoko, kumele wazi ID yayo - 00013963. Khona-ke, uma ufaka umyalo player.additem ungeza ID into, okungukuthi, 00.013.963, kanye nenani esikhaleni, isibonelo, 2. Ngenxa yalokho, kufanele Kubonakala sengathi lokhu: 00013963 player.additem 2, futhi yokusungula yakho kuyoba ezimbili ebony nesigqoko sokuzivikela.
Ungaluthola kuphi ID into
kakade Sinike isibonelo uma ligqoke isigqoko lapho kusobala ukuthi kukhona amakhodi "Skyrim" kuzo zonke izifundo, kodwa odinga ukukwazi uhlobo ID, ukwengeza nto ethile okwamanje isitokwe. Kukhona ezinye amakhodi engasisiza kulokhu.
Okokuqala, ungafunda zonke izimfuno ID asebenzayo ngokusebenzisa showquesttargets umyalo. Kuyokusiza ukuba ubhekane nezingcindezi izimfuno nzima kakhulu ngokusebenzisa amakhodi "Skyrim" ushintsho kuyaqhubeka ku emsebentini lotsite.
Ngokulandelayo, ikhodi ID player.showinventory libonisa yonke izinto in yokusungula yakho. Lokhu kuzosiza clone yini umyalo player.additem.
Uhla oluphelele lwezinto ID ngeke kutholakale, kodwa uma ungena egumbini yokuhlola ikhodi engenhla, ungakwazi ukukhetha iqembu elithile izinto okwamanje isitokwe futhi ngokusebenzisa player.showinventory ufunde ID abo.
Enye indlela - ubone uhlu oluphelele lwazo zonke izinto i-ID niche sites, kodwa asazi ukuqinisekisa ukunemba ngayinye ukwaziswa okusencwadini.
Ukuzilibazisa nobunikazi kwakudingeka izinto zokuzilibazisa zabo
In the game "Skyrim" amakhodi izinto kusukela elabhorethri alchemical kuyinto aziziningi kangako. I eziyivelakancane wabo futhi babe ID abo siqu esiyingqayizivele. Ngakho, kuzoba wusizo umdlalo "Skyrim" ikhodi: inhliziyo mfunda noma inhliziyo heather ngawo siyolanda oyifunayo yokusungula isithako (player.additem 0003AD61 X). Ngesikhathi izimpande Nirn, omunye edume kakhulu esengeziwe "Ekuqothulweni" izitshalo, ID - 00059B86, olunye uphiko neSilo - 000727E0, ngesikhathi Rot Namir - 0004DA24.
Uma uthanda ukuba ziqhubekele, ngokuqinisekile ube ezibalulekile ukuze uthole Dragon izikali (0003ADA3) kanye Dragon amathambo (0003ADA4). Ukudala izikhali ezingavamile uzodinga ore: Igolide (0005ACDE), ebony (0005ACDC), mercury (0005ACE2).
Omunye umsebenzi okuthakazelisayo - ukuzingela. Ungakwazi ukuchitha amahora ukugijima emva isihamu ezinye abampofu ukuba akhumule isikhumba sakhe bese zempi ukukhanya. Kodwa unya ngokweqile ezilwaneni akudingekile uma wazi ID izikhumba isihamu (0003AD90) noma bear (0003ad52), impisi (0003AD74) noma, ekugcineni, nembuzi (0003AD8E).
Ngokwemvelo, uzodinga ukuhlomisa emsebenzini. Wake wambona smithy wasezulwini, esimelela at Abangane? Lona umdlalo best smithy. Ingabe ufuna sicabange okufanayo? Faka player.placeatme 000BBCF1, futhi uzovela phambi kwakho.
"Morrowind" Iphupho abalandeli Nokho, lwenziwa 'Skyrim', ngosizo ukukopela amakhodi, kodwa namanje nikwazi ukuthwala izinto besiyoba sikhulu, ngezinye izikhathi ubukhulu akuyona kunabayeni isakhiwo egcwele (smithy waseZulwini) nganoma iyiphi indawo emephini. Ngakho, ungakwazi thatha Fort, usebenzisa aphambe ukuba kudume futhi ukwakha, yini ku "Morrowind" kungenzeka baphupha kuphela.
Uma usebenza nge wonke amakhodi ukukopela ethulwa ngenhla kufanele uqaphele ukuthi ngamunye wabo senzelwe ukusetshenziselwa izinhlelo abadlali. Onjiniyela benze le miyalo ukuba umsebenzi wayo ube lula. Ngakho iyiphi ikhodi ukukopela, ngemcondvo, kungaholela hhayi kuphela kwabanye "glitches" ngesikhathi umdlalo, kodwa futhi ukuze izinkinga jikelele ne umdlalo. Kungathatha off, hambisa, ziyeke ukusebenza, angeke nokongiwa ukulayishwa nokunye. Kodwa ingxenye amakhodi kakhulu njengokuzijabulisa okungenangozi, kufanele siyisebenzise ngokuqapha.
Ngaphezu kwalokho, ikhodi ngamunye uya at bangakunaki ukuphila okwangempela umdlalo. umzamo Onjiniyela okuningi kokuzikhandla, ukuze izwe "Skyrim" kwaba efanayo kakhulu ekuphileni kwangempela, okwenza umdlalo acebile, mnandi futhi playability kwabasebenzisi. Kodwa kubalulekile, isibonelo, ukufaka ukungafi, futhi isifiso ukulwa nomuntu kancane kancane balahlekelwa ngenxa izimpi ukukhanya kakhulu.
Ukusetshenziswa isivivinyo ikamelo futhi ukukopela amakhodi, isibonelo, wanqamula izindonga, oluthinta ngqo esibonakalayo of the game, okungase kuholele ekubeni uthunyelelwe le "ukuwa" ngendlela ka "Skyrim": kusukwe kudeskithophu ngenxa omkhulu CPU umthwalo. Ikhodi ku ukudlula izimfuno breaking isakhiwo indaba, uma umsebenzi kwakuhambisana nezinga eliphansi uchungechunge efanayo.
Ngesikhathi esifanayo, ephephile kukhona amakhodi yokwengeza izinto, kodwa futhi ezingemnandi kakhulu okwangempela.
Unquma lapho ukusebenzisa amakhodi, kodwa futhi okuhle kunakho konke, yebo, ukudlala ngaphandle kwabo.
Uhambo oluya kwelinye izwe, noma Yini itshe lesihogo elisetshenziselwa?
Izakhiwo ezisetshenziselwa kanjani "i-Maincrafter"
Pantyhose ngaphandle iminwe - isicelo eseyintsha yesikhashana noma zakudala?
Isimemezelo esisodwa (esenziwe lula). I-oda lokugcwalisa
Tanakan ukuze bhukwana imfundo
Online esitolo of izingubo nezicathulo "Lamoda". Izibuyekezo ikhasimende